Kubudirira nenhamba dzekunzwa: Toni inotanga Europe shopu - Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
tonies SE nhasi yatanga chitoro chitsva chepamhepo chevatengi vepasiresezvakaziviswa mukati. Kubva muna Kubvumbi 27th, mapato anofarira anogonamukati kubva kuNetherlands, Belgium, Luxembourg, Spain nePortugal vanotenga maodhiyo anohwina mubairo wevana. Izvi zvinoreva kuti matani anowanikwa munyika gumi nembiri dzakasiyana mumakondinendi maviri.
Marcus Stahl, Co-CEO tonies: "Tinofara zvikuru kuti toni dzave kuwanikwa kune dzimwe nyika. Tave tichigamuchira kubvunza kubva kune dzimwe nyika dzeEurope kwemakore akawanda. Iye zvino tinogonawo kuvashandira. Mushure mekubudirira kupinda mumisika yeUK, Ireland, USA neFrance, tave danho riri padyo nedonzvo redu rekuita kuti matani awanikwe nevana vese pasi rese.
82 nhamba dzekutaura Chirungu
Kubva pakatanga chitoro chitsva cheEU, vatengi vanogona kutarisira kune yakakura portfolio yemakumi masere nemaviri emutauro weChirungu maToni, ayo acharamba achiwedzerwa mune ramangwana. Izvi zvinosanganisira marezinesi e blockbuster kubva kuDisney, Universal, DreamWorks uye eOne ("Peppa Nguruve"). Kune zvakare yemhando yepamusoro Toniebox yekutanga yakaiswa mune matanhatu akasiyana mavara pamwe nevanozivikanwa Tonie vateereri (mahedhifoni), Tonie transporter (bhegi) uye inoshanda USB yekuchaja chiteshi.
Pamusoro pezvo, masumbu matatu akasarudzika, rimwe nerimwe riine matatu emhando dzeDisney classics, anopihwa neEUR 129,95. Iyo yakakurumbira dhijitari papuratifomu mytonies.com inowanikwawo kune vese vatengi vepasirese. Kutanga, anopfuura maminetsi mazana maviri ezvinyorwa zvechiGerman, Chirungu neFrench-mutauro zviripo pano kuitira kugadzira Toni yekudhawunirodha mahara.
Pamusoro peGermany, Austria neSwitzerland, matani akamiririrwawo muUK neIreland kubvira 2018. Mumatsutso 2020, mushure megore rimwe chete rekugadzirira, kupinda mumusika muUSA kwakabudirira. France ichatevera muEurope mumatsutso 2021, uye mamwe mapindiro emusika wepasirese akatorongwa.
Rumwe ruzivo nezve shopu nyowani yepamhepo pa: tonies.com/en-eu.
tonies toniebox starter set incl. 89,99 EUR tenga
Kare Webedia: "Podcast bato" ine renji chinangwa
Inotevera Hutsinye zombie kuuraya paNintendo Chinja
New loot: Borderlands 3 zvinokwezva nekamuri mepu 3: Bunker Master
Mushonga weCorona wakabiwa! Math aces anoenda pakutsvaga mumutambo wekubuda